Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Omicron: Loza vaovao sa tsy misy dikany?
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Sary natolotr'i Gerd Altmann avy amin'ny Pixabay
Omicron - ilay variana vaovao izay efa nanakorontana ny tsena ary niteraka fandrarana ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena sasany any atsimon'i Afrika - dia mety hanimba ny fahasitranan'ny indostrian'ny hotely, indrindra raha mandroso ny drafitra hanamafisana ny politikam-panadinana, toa an'i Etazonia.
Ny mari-pamantarana dia ny famandrihana hotely ho avy, fivoriana ary hetsika hafa mifandraika amin'ny hotely dia hisy fiantraikany amin'ny andrasana amin'ny sakana amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ho avy, na ny tenany, ny orinasa na ny governemanta, araka ny HotStats.
Ny angon-drakitra tamin'ny volana oktobra, izay tsy nanana afa-tsy Delta ihany no niatrika, dia nahita fitsanganana manaitra tany Afovoany Atsinanana, notohanan'ny Expo 2020 tany Dubai, Expo eran-tany 182 andro izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ary maharitra hatramin'ny martsa.
Ny faritra maneran-tany hafa dia tsy afaka namerina ny fahombiazan'i Dubai sy ny Afovoany Atsinanana midadasika kokoa. Any Etazonia, ny indices lehibe dia mbola nidina isa roa tamin'ny Oktobra 2021 v. Oktobra 2019.
Hatramin'ny nisondrotra haingana ny fibodoana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fahavaratra, nahatratra ny fara tampony tamin'ny volana Jolay, ny fibodoana any Etazonia Nanomboka tamin'izay dia somary mibaribary kokoa na latsaka, famantarana fa tsy azo tohanana amin'ny haavo mitovy amin'ny teo aloha ny firongatry ny fialam-boly.
Taorian'ny namerenan'i Aotrisy ny fanakatonana tamin'ny 22 Novambra, dia nanitatra izany hatramin'ny 11 Desambra, lasa firenena EU voalohany nandray fepetra toy izany manoloana ny firongatry ny COVID-19.
Nampidirin'i Portugal indray ny fameperana henjana kokoa, ny fanaovana saron-tava tsy maintsy atao ary mandidy ny taratasy fanamarinana nomerika manaporofo ny fanaovana vaksiny na ny fahasitranana amin'ny COVID mba hidirana amin'ny trano fisakafoanana, trano fijerena sarimihetsika ary hotely.
Raha mbola manohy manambatra ny fiverenany i Azia-Pasifika, dia manamafy ny sisin-tany ihany koa izy ho setrin'ny Omicron spectre. Japana tamin'ity herinandro ity dia nanambara fa hanakana ny fahatongavan'ireo vahiny ny firenena, herinandro vitsy monja taorian'ny fanalefahana ny fameperana ho an'ny tompon'ny visa, anisan'izany ny mpanao dia lavitra sy ny mpianatra iraisam-pirenena. Ary nosakanan'i Filipina ny fahatongavan'ireo firenena eoropeana fito, anisan'izany i Holandy, Belzika ary Italia.
Ahoana ny amin'ny sidina?
Amin'ny lafiny iray, satria maro ny manam-pahaizana momba ny fitsangatsanganana no misaintsaina na ny vaovao Omicron variant dia hianjera ny drafitra fitsangatsanganana fialan-tsasatra, fanadihadiana vao haingana nataon'i Medjet (nihazakazaka tamin'ny tapaky ny volana novambra, nalefa tany amin'ny toby fidirana mailaka misy mpandeha maherin'ny 60,000), dia nampiseho fa ny fiakarana sy ny variana teo aloha dia tsy nisy mpandeha nirohotra hanafoana ny drafitra.
Tamin'ny 15 Novambra, maherin'ny 84% amin'ireo namaly no nanana drafitra fitsangatsanganana ho avy. 90% no nilaza fa mikasa hanao dia an-trano ao anatin'ny sivy volana manaraka (65% ao anatin'ny telo volana manaraka), ary 70% no manantena ny hanao dia iraisam-pirenena ao anatin'ny sivy volana manaraka (24% ao anatin'ny telo volana manaraka). Raha 51% amin'izy ireo no nitatitra fa nisy fiantraikany teo amin'ny drafitry ny diany ho avy ny variana sy spike teo aloha, ny 25% tamin'ireo namaly ihany no nitatitra fa tena nanafoana noho izy ireo.
Nisy ny fikarohana fanampiny:
• 51% no nilaza fa efa nisy fiantraikany teo amin'ny drafitra fitsangatsanganana ho avy ny variana teo aloha sy ny spikes (27% no namaly hoe “tsia”, 23% no mbola tsy azo antoka).
• Ny 45% no nilaza fa voan'ny COVID-19 ary ny karazany no mampanahy, raha ny 55% kosa dia nitanisa aretina hafa, ratra, na fandrahonana fiarovana ho zava-dehibe indrindra.
• Amin'ireo miahiahy momba ny COVID, 42% ihany no nanahy ny amin'ny fitiliana tsara ka tsy afaka miverina; 58% no niahiahy bebe kokoa momba ny fampidirana hopitaly noho ny COVID raha tsy ao an-trano.
• Mbola nidina hatrany ny dia ara-barotra, ary 2% ihany no namaly fa ho an'ny raharaham-barotra ny diany manaraka.
• 70% dia mikasa ny handeha miaraka amin'ny fianakaviana, 14% miaraka amin'ny namana, 14% irery.
Raha tsiahivina, ny famerana ny US Omicron amin'izao fotoana izao dia mihatra amin'ny teratany vahiny ihany. Ho an'ny olom-pirenena amerikanina sy tompon'ny visa miverina any Etazonia dia mbola tsy miova ny fepetra hidirana indray: fitsapana virosy COVID ratsy tsy mihoatra ny 3 andro alohan'ny hiverenan'ny sidina ho an'ny mpandeha efa vita vaksiny tanteraka, tsy mihoatra ny 1 andro ho an'ny mpandeha tsy vita vaksiny. Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny fepetra takiana, sy ny famaritana ny "voa vaksiny tanteraka". ao amin'ny tranokala CDC.